फेरि फुट्‍यो माओवादी केन्द्र, कसले गर्दैछ नयाँ पार्टीको नेतृत्व ? - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
फेरि फुट्‍यो माओवादी केन्द्र, कसले गर्दैछ नयाँ पार्टीको नेतृत्व ?
२३ बैशाख २०७५, आईतवार ०७:२३ May 6, 2018 Nonstop Reporter
नेकपा माओवादी केन्द्र फेरि विभाजन भएको छ । एमालेसँग एकताको अन्तिम तयारी भइरहेको बेला माओवादी केन्द्रका नेता-कार्यकर्ताहरुले नयाँ पार्टीको घोषणा गरेका छन् ।
एमालेसँग हुने भनिएको एकताप्रति असहमति राखेर अलग भएको घोषणा गरेका नेता विश्‍वभक्त दुलाल ‘अाहुती’को संयोकत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएको हो । नयाँ पार्टीको नाम ‘वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल’ राखिएको छ ।
सन् १८१८ मे ५ अर्थात अाजैको दिन विश्व सर्वहारा वर्गका नेता कार्ल मार्क्स जन्मेका थिए । विश्वभरका कम्युनिस्टहरुले कार्ल मार्क्सको द्धिशतवार्षिकी मनाइरहेका बेला नेपालमा नयाँ पार्टीको जन्म भएको हो ।
काठमाडौंमा शुक्रबार सम्पन्‍न भेलाले विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा पारित गर्दै अाहुतीको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । जसलाई वैचारिक, राजनैतिक तथा सांगठनिक अभियान समिति भनिएको छ ।
समितिमा पोलिटब्यूरो सदस्य ध्रुब पराजुली, अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वउपाध्यक्ष जागृत रायमाझी, विदुर खरेल, धनकुमारी सुनारसहित अधिकांश माओवादी केन्द्रका नेता रहेका छन् ।
भारतीय झण्डा रहेको टोपी नेपाल प्रहरीको शिरमा
‘बोक्सी’ आरोपमा निर्घात कुटिएकी राधा मञ्चमै भक्कानिएपछि सबका आँखा रसाए !
समानुपातिकमा प्रदेश सभामा पर्ने सबै दलका २२० सांसदहरुको सूची
कालिकोटको मुम्रामा भिडन्त, २ घाइते, बुथ कब्जामा